Ngaphambi kokuba uphinde uziveze, qiniseka ukuba ubuza lo mbuzo - Ibhlog
Ngaphambi kokuba uphinde uziveze, qiniseka ukuba ubuza lo mbuzo
Ngaba ucinga ukuzibuyisela kwakhona? Emva koko kuya kufuneka uyifunde ngocoselelo ngaphambi kokuba uqale.
Kule mihla, awunakucofa nje kwimagazini okanye ukhangele kwi-intanethi ngaphandle kokujongana namabali abantu abazibuyisele ngokwabo, bafumana ulonwabo noxolo kwinkqubo.
Kwabanye abantu, utshintsho lunokuba lufihlakeleyo, njengotshintsho olwenziweyo apho bafumana khona iinwele ezintsha okanye ikhabethe ehlukileyo, ke bajongeka behlukile kulowo babenjalo ngaphambili.
Abanye banokuthatha indlela egqithileyo, ukutshintsha iindlela zomsebenzi kunye nendawo yokuhlala, njengokulahla umsebenzi njengegqwetha okanye umgcini-bhanki wotyalo-mali ukukhulisa i-kale kunye nokukhulisa iinkukhu kwifama yasemaphandleni isiqingatha selizwe.
Ukwenza iinguqu ezinkulu kubomi bethu kunokuba yinto entle kakhulu, kodwa ngaphambi kokuthatha nawaphi na amanyathelo okwenza njalo, kukho umbuzo omnye ekufuneka uphendulwe ngokunyanisekileyo:
Ngokwenza olu tshintsho, ngaba usondela ngapha okanye kude neyona nto uyiyo?
Ubunyani Vs. Ebambeleyo
'Kuwe ngokwakho yiba yinyani' ngumzekeliso esifanele sonke siwulandele. Nangona kunjalo abantu abaninzi bazenza into engeyiyo eyona nto bayiyo ngaphakathi - eyona nto bafuna ukuba yiyo -Ukuze bazilungele izangqa zentlalo abakholelwa ukuba kufuneka babe yinxalenye.
Kukho umahluko omkhulu phakathi kokuphalaza ulusu oludala olungasakulungeliyo ukuze ungoyena mntu ungoyena mntu, kwaye unikele ngesinxibo sendoda ocinga ukuba abanye abantu baya kuthanda ngakumbi.
Ngaba ukhe wazama ukuzenza into ongekho kuyo nayiphi na ubude bexesha? Kuyadinisa ngokupheleleyo ukugcina i-façade ixesha elide, kwaye nangona kunokuba kumnandi ukuzintywila kule ndima okomzuzwana, ungaphela kungekudala lusizi kunye nenzondo.
Izinto ziba nzima nangakumbi ukuba ubomi babanye abantu buphela bunxulumana ngokupheleleyo nefadade obukhe uyinxibile.
Umzekelo, masithi kukho umfana okufuna nyhani ukuphila ubomi bokuhambahamba, ehamba-hamba kwihlabathi lonke kwaye esebenza ixesha lesingxungxu kwiifama ze-organic ngelixa ebhala incwadi awayehlala ephupha ukuyenza.
Mhlawumbi uvela kusapho olutyebileyo olunokungavumelani nento enjalo, ke nangona wazama ukuvukela iminqweno yabo xa wayesemncinci ngokujoyina iqela le-punk kunye nokwenza imijikelo embalwa ekubuyiseleni kwimeko yesiqhelo, ekugqibeleni wanxiba ingubo Ngomntu abanokuzingca kumzamo wokungena kuwo.
Iminyaka embalwa yeetumente zegalufa kunye neeklabhu zesidlo sangokuhlwa kamva, ufumanisa ukuba utshatile neqabane elihle angamthandiyo, enomntwana (okanye abathathu) uyamcekisa ngokumthiyela kubomi angabufuniyo.
Nangona bekuya kuba nzima ngakumbi ukuzinzisa ekuqaleni, ngaba bekungayi kuba yinyani kwizithambiso zakhe zokwenyani ukuba ibe lukhetho olungcono ekuhambeni kwexesha?
'Andilunganga Nantoni na' - Kutheni Le Yenye BIG Lie
Izizathu ezi-5 Wonke umntu kufuneka enze iBhodi yokuBona
Nika ezi zinto zingama-20 ukuba ufuna ukuphumelela ebomini
Kutheni ufuna iSicwangciso soPhuculo lwaBantu (kunye nezinto ezisi-7 ekufuneka ukuba unazo)
9 Kwiincwadi Zokuzinceda eziBalaseleyo ezifumanekayo namhlanje
Kutheni uzenza ngathi?
Kunokubakho naliphi na inani lezizathu zokuba abantu baphinde bazibuyisele kwicala elibasusa kubunyani kunokuba babhekise kulo, kodwa esona sizathu siphambili kukwamkelwa okulula.
Ngaba uqaphele ukuba bangaphi abantu abane-wardrobe yomsebenzi eyahluke mpela kwindlela abanxiba ngayo ngexesha labo? Kwabaninzi, umsebenzi abawenzayo yindima abayidlalayo, endaweni yokongeza ubuqu babo obuyinyani.
Umsebenzi owanelisayo oquka indalo yomntu bubunewunewu obunqabileyo. Uninzi lukhetha imisebenzi abacinga ukuba iya kuhlala izinzile kwaye ibe nengeniso kunokuba ixhase umphefumlo.
Xa umntu amkela umsebenzi onengqiqo kunokuba awuthande, uhlala ubathatha kude kakhulu nobuntu babo kunokuba bebefuna njalo.
Kulula ukutyhala imida kwaye ubandakanye imiba yokwenyani komntu kwizinto ezifana ne-wardrobe kunye ne-desk accoutrements xa umntu ekumgangatho ophantsi, kodwa nje ukuba ukunyuselwa kuqale ukwenzeka, izinto kufuneka zitshintshe.
Umntu angaxelelwa ukuba angathanda ukunyuselwa ukuba angazidayayo iinwele zakhe zibuyele kwi-hue yendalo, okanye ayeke ukunxiba incoko kunye neesuti zabo, ke bayatshintsha. Ke kuya kufuneka bafunde indlela yokuziphatha ngendlela ethile xa benxibelelana nebhodi yabalawuli, yiyo loo nto yenye ingqimba yemaski ekubethweni kuyo.
indlela yokudlala nzima ukufumana isoka
… Kwaye ke iyaqhubeka, maleko phezu komaleko. Ukujonga ukuba lingakanani ixesha esilichitha sisebenza ngaphezulu kobomi bethu, kunokuba lula ukuba silibale ukuba ngoobani kanye kanye xa sichitha iiyure ezingama-40 + ngeveki sizenza umntu esinguye. (Okanye ngaphezulu koko, ukuba abantu esingena kubudlelwane nabo bakholelwa ukuba sisigqubuthelo abasibonayo, endaweni yokuba sibhinqe.)
Iindlela ezintle zokuZibuyisela kwakhona
Endaweni yokusondela ekuvuseleleni ngokubuza ukuba ungatshintsha ntoni ukuze abanye abantu bakuthande kwaye bakwamkele ngakumbi, indlela ebhetele kukuzibuza ukuba zeziphi iinkalo zobomi bakho ocinga ukuba ungazitshintsha (okanye kufuneka) uzitshintshe ukuze uphile ngokuthembekileyo, nangaphezulu uvumelane nokuba ungubani kanye kanye.
Oku kunokuba yindlela enzulu kuba abantu abaninzi abayazi ngokwenene ukuba bangobani ngaphakathi kuthi sonke sifihla kwaye silingise kakhulu kangangokuba umntu oqhelekileyo akanakho ukubhala iprofayile ecacileyo ngaye ukuba bekunyanzelekile.
Ukuba uziva ngathi ukulungiswa kwakhona kulungile, ungaqala ukunyaniseka ngokwenene Malunga nawe, uvuma iipateni zokuziphatha ongathanda ukuzitshintsha. Oku kunokuba yiyo nantoni na ukulibazisa okungapheliyo okanye ukunqanda, ngeendlela onokuthi ucekece ubudlelwane kwakhona kaninzi.
Ukusebenza ekutshintsheni le mikhwa kunokuba nemiphumo emihle, efikelela ixesha elide kubomi bakho bonke, kodwa kunokuba nzima ukusebenza ngokwakho. Ukufumana uncedo kunyangi okanye kumqeqeshi wobomi kunokuba yinto elungileyo ukwenza utshintsho lwenyani, oluhlala luhleli lwenzeka.
Khumbula ukuba ungaqala kancinci! Ukuzihlaziya kwakhona akuthethi ukuguqula ubomi bakho buyeke ngokupheleleyo-kulungelelwaniso lobomi obuncinci kunokukhokelela kutshintsho oluhlala ixesha elide inentsingiselo Ngaphandle kokuthengisa zonke izinto zakho ukuze uphile ngeyurt eNepal.
Ukuba uzama ukuhlala engqondweni nangokomzuzu wokunciphisa uxinzelelo, umzekelo, ungabeka bucala ishumi elinesihlanu lemizuzu yeebhloko zexesha (into yokuqala ekuseni neyokugqibela ngokuhlwa, masenze yitsho ngokucamngca ngengqondo. Ukuba iyakusebenzela, ungayonyusa iye kwiibhloko zemizuzu engama-30.
Ukuba uziva ngathi utshintsha amakhondo emisebenzi, zama ukuya emsebenzini okwethutyana kwaye uthathe enye i-gig yexeshana kwicandelo lakho elisandula ukukhethwa ukuvavanya amanzi ngaphambi kokuntywila ngokupheleleyo.
Utshintsho oluyinyani alukho lula, ngakumbi kuba kubandakanya ukuzibuza imibuzo enzima kakhulu kwaye uvume eminye iinyaniso kunokuba nzima ukuyamkela. Ukunyaniseka ngokwenene kwiimpendulo zakho kunokubonisa izinto obukade uziphepha ukuza kuzo, nokuba kungenxa yokoyika wena okanye ngenxa yokuphoxeka nokwenzakalisa abanye.
Ungafumanisa ukuba ufikelele kumda wamandla akho ukuba ube yinto ongeyiyo, kwaye awusoze ubekhona, kwaye ukutshintsha oku kuya kuphosa ubomi bakho (kunye nobomi babantu abasondele kuwe) kwisiphithiphithi okwethutyana, kodwa Okokugqibela, uya konwaba ekuhambeni kwexesha.
Kulula ukufudukela kwindawo entsha okanye ukutshintsha ikhabethe lakho, kodwa ukutshintsha ikhondo lomsebenzi okanye ukuphela kobambiswano olungasasebenziyo lelinye ibali lilonke.
Ekugqibeleni, nangona kunjalo, imeko iyehla kuwe ngokunyaniseka malunga nokuba ungubani ngoku, ufuna ukuba ngubani, kunye nokufumana indlela esuka kwenye iye kwenye.
ukuthatha uxanduva ngezenzo zakho emsebenzini
indlela yokuxelela intombazana ukuba intle ngendlela entle
inde kangakanani i-chip ezuza ukulungiswa okuphezulu
ukuba njani ngoku
iimpawu zokungazithembi endodeni
Yimalini amatikiti eWrestlemania 2017